Umthetho Wezokuqashwa | Law & More BV
Umthetho wokuqashwa uyindawo eyengeziwe yomthetho. Amalungelo nezibopho kulawulwa kuzinkontileka zomsebenzi, imithetho yokuqashwa, izivumelwano ezihlanganisiwe, umthetho kanye nezomthetho. Abameli bokuqashwa kwe Law & More baqeqeshiwe futhi bayayazi imithetho yamanje kanye namandla.
> Iseluleko sezomthetho
> Iwusizo, Yanele futhi I-Transparent
Izinkinga zomthetho wokuqashwa zivame ukuba nemiphumela efinyelela kude kubaqashi nabasebenzi. Kungakho kubalulekile ukuthi usizwe ngummeli wezomsebenzi okhethekile nonolwazi. Ngemuva kwakho konke, izeluleko zomthetho ezinhle ngomthetho wokuqashwa kusengaphambili zinganquma ngokuzayo. Ngeshwa, izingxabano ngeke zivikeleke ngaso sonke isikhathi, ngokwesibonelo uma kuxoshwa, ukuhlelwa kabusha noma ukungabikho ngenxa yokugula. Lolu hlobo lwesimo lungemnandi kakhulu futhi luthinta imizwa futhi lungalimaza ubudlelwano bokuqashwa phakathi komqashi nomsebenzi. Uma ukhathazwa yingxabano yomsebenzi, Law & More uzokujabulela ukukusiza uthathe izinyathelo ezifanele.
Law & More inikeza usizo kumabhizinisi, abaphathi bomthetho, abaqashi kanye nabasebenzi emkhakheni wezomthetho wokuqashwa. Iqembu lethu linikeza izeluleko zezomthetho futhi lizoshona uma kunesidingo.
• ukudweba kanye nokuhlola izinkontileka zokuqashwa ezizimele nezizimele;
• Ukuqedwa kwezinkontileka zomsebenzi zabaqashi nezisebenzi;
• Usizo ngezingxabano zomsebenzi
• Ukumiswa kwefayela labasebenzi
• izinqubo zokuxoshwa
• Izinkinga eziphathelene nezicelo zamaholo
Izinkinga eziphathelene nezivumelwano ezihlanganyelwe
• iholidi kanye nekhefu
• ukugula nokubuyiselwa emzimbeni
• Ukuzimisela ngokubambisana
• isibopho sabaqashi nabasebenzi.
Njengomqashi, ubhekana nezinkinga zomthetho wokuqashwa nsuku zonke. Kufanele udwebe izinkontileka zokuqashwa, ubhekane nabasebenzi abangasebenzi noma abagulayo nezingxabano zabasebenzi noma inkampani yakho ingahle ihlele kabusha ngenxa yokushintsha kwezimo zemakethe. Ngabe uyazi ukuthi ayini amalungelo akho nezibopho zakho? Noma yini ongahlangana nayo, sizokujabulela ukukusiza. Emva kwakho konke, isu elihle lomthetho wezabasebenzi libalulekile kwinkampani enempilo.
Njengomsebenzi, kuzofanela uhambisane nomthetho wezabasebenzi, oceliwe futhi ongatholakali. Cabanga ngokwamukela nokusayina inkontileka yokuqashwa, isigatshana esingaqhudelanayo kanye namalungelo nezibopho zakho uma kugula nokuxoshwa. Sizokujabulela ukukusiza nganoma yiluphi udaba lomthetho wokuqashwa oludinga usizo nalo.
Iwusizo, Yanele futhi I-Transparent
Ngaphandle kwezeluleko zochwepheshe, ungathanda ukuthola izeluleko zomthetho ngokushesha. Siyakwazi lokhu futhi sisetshenziselwa ukusebenza ngokushesha nangokufanele. Siyaqinisekisa ukuthi kulula ukufinyelela kuyo futhi singakunika masisha izeluleko ezisebenzayo nezochwepheshe. Ungathembela kithi ukuthola izeluleko ezinembile futhi ezimfishane nezicacile.
Indlela esisebenza ngayo isobala futhi iqondiswa izixazululo. Singena ezingxoxweni nawe ukuxoxa ngecala lakho, izifiso zakho, amathuba asemthethweni kanye nesithombe sezezimali. Sizobe sesinquma isu elicacile lokubonisana nawe. Isinyathelo ngasinye kuxoxiswana ngaso nawe, ukuze ungaphinde ubhekane nanoma yiziphi lezimanga.